Uyenza njani into yelungelo lokushicilela okanye uphawu | Ezezimali
USusana Maria Urbano Mateos | | iinkampani, ishishini
Kuphela ngokwenza ilungelo elilodwa lomenzi wechiza uluvo lwakho onokulufumana ilungelo elilodwa lokuzikhethela ngayo. Ukuze ndi patent umbono Kuya kufuneka ulungiselele amaxwebhu aliqela, ulandela indlela esetyenziswa ngayo ulawulo. Uluvo lwakho luya kuba nelungelo elilodwa lomenzi kuphela xa lihlangabezana namaxwebhu afanelekileyo kwaye lihlangabezana neemfuno zobutsha, inyathelo lokungenisa kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza abizwa ngokuba ngamalungelo endawo Ezingabanini bezimvo ke ngoko kufuneka zikhuselwe ngokubhalisa ilungelo lomenzi kuwo onke loo mazwe apho ukhuseleko lunqwenelwa khona. Ngokwesiqhelo, ipatent iqhutywa kwinqanaba likazwelonke kwaye iyandiswa ngokuxhomekeke kwimpumelelo yezorhwebo elawulwa ngulo mbono.
Into abantu abazibuza yona yileNdingayenza njani ipatent ngombono?, masicace gca, ayizizo zonke izinto ezenziweyo, izimvo okanye izinto ezintsha ezamkelekileyo ukuba zibe nelungelo elilodwa lomenzi kuba ukusukela ukuba into enelungelo lokuba nelungelo lokukhuselwa njengeLungelo elilodwa lomenzi kufuneka bahlangabezane nezi mfuno zilandelayo:
Inyathelo lokungenelelaIsisombululo sobugcisa asinakucaca gca.
Inoveli: uyilo kufuneka lube nezinto ezintsha.
Isicelo semizi-mveliso: kufanelekile ukuba ifumaneke.
Ukwazi ukuba ngaba uyilo lwethu luyazigqiba na iimfuno zangaphambili, kufuneka sithathe inyathelo lokuqala kwinqanaba le- uphando. Eli nyathelo liqukethe Hlalutya uphinde uphande ukuba akhona na amaxwebhu abenzi bamalungelo abenzi, Inxulumene nayo nayiphi na indlela ebalulekileyo ekuyilweni kwethu. La maxwebhu anokufunyanwa ngokubonisana novimba wolwazi welungelo elilodwa lomenzi, ezinye zazo yi-OEPM, i-EPO, i-USPTO phakathi kwezinye, eziza kubonelela ngolwazi olubalulekileyo malunga nokuyilwa kwezinto ezintsha kunye nomsebenzi wengcinga yethu.
Emva kophando olwenziwe, sinokuzifumana sijamelene neemeko ezahlukeneyo: enye kukuba zonke zizalisekisiwe. iimfuno kwaye sinokucela iPatent ngokuhlawula iifizi ezahlukeneyo, enye kukuba ayizifezekisi iimfuno kwaye umbono kufuneka ukhutshwe, kwaye ekugqibeleni unokuhlangabezana nazo, kodwa into esiyenzileyo kufuneka ikhuselwe yindlela yoLungiselelo kunokuba ibe lilungelo elilodwa lomenzi wechiza.
Inyathelo lesibini kwilungelo elilodwa lomenzi wechiza lokuyila kukulungiselela kwangaphambili kwaye ubhale a inkumbulo echazayo, ehambelana neeparameter esekwe kwifayile ye- Imigaqo yePatent. Le ngxelo kufuneka iqulethe inkcazo ecacileyo yokuyilwa ukuba ibe nelungelo elilodwa lomenzi wechiza, ibalaselisa ubutsha kunye nokuyila umbono okanye imveliso. Le nkumbulo kufuneka ibe yenziwe ngokusekelwe kumthetho wangoku nowangoku wePatent. Mhlawumbi uyazibuza ukuba inkumbulo yenziwe njani, emva koko ichazwa ngokweenkcukacha.
1 Ingxelo yenziwe ngala macandelo alandelayo:
2 Ngaba amalungelo epropati yam ekhuselekileyo akhuselwe lilungelo elilodwa lomenzi wechiza?
3 Ngaba kuyabiza ukubhalisa uphawu lwentengiso kunye nelungelo elilodwa lomenzi kwimveliso?
4 Kutheni le nto kufaneleka ukuba ndinelungelo elilodwa lomenzi wechiza ngombono wam, ukuba ndingazithengisa iimveliso zam ngaphandle kokubhalisa uphawu lwentengiso?
4.1 Iimodeli zokuSebenzisa:
4.2 Ungasifaka njani isicelo semodeli eluncedo?
5 Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza:
6 Ngaba usetyenziso lweselfowuni lunelungelo elilodwa lomenzi wechiza?
Ingxelo yenziwe ngala macandelo alandelayo:
Nje ukuba kubhalwe ifayile ye inkumbulo echazayo kolu luvo, siya kuba sikulungele ukuya kwinqanaba lesithathu nelokugqibela, Iqhubekekisa. Oku kubandakanya ukugcwalisa nokulungisa iifom zesicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza, ahlawule iikhomishini ezisemthethweni ezisesikweni kwaye angenise onke amaxwebhu ku Iofisi yaseSpain yamalungelo awodwa omenzi kunye nophawu (OEPM) ngendawo eMadrid, ukukwazi ukuyenza kwi-intanethi kunye nesatifikethi somsebenzisi wedijithali. Ngokukhawuleza ukuba onke amaxwebhu afunekayo ebengenisiwe, ekugqibeleni siya kuyifumana eyethu inombolo yelungelo elilodwa lomenzi wechiza, ukuzuza kuloo mzuzu, amalungelo okuba bodwa kunye nokuba ngasese malunga nokuyilwa, okanye umbono onelungelo elilodwa lomenzi wechiza.
Ngamafutshane, kufuneka Chaza uphawu kunye nomfanekiso oza kuphakamisa ukuba usebenzise njengokwahlukileyo, emva koko uqhubeke ukumisela ukuba yeyiphi imakethi ofuna ukusebenza kuyo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, kufuneka iqinisekiswe ngokusesikweni ukuba uphawu lwentengiso oceba ukubhalisa kwaye ulusebenzise, ​​aluzange lubhaliswe ngaphambili nangubani na, kwiimarike zomdla wakho. Ukongeza, kufuneka kuqinisekiswe ngamaxwebhu aqinisekileyo ukuba uphawu alufumaneki kuyo nayiphi na into Izithintelo ngokupheleleyo ekusetyenzisweni kommandla iphi kwaye icacile ukuba ayinantsingiselo imbi yokuvakala.
Inqaku elibaluleke kakhulu ekufuneka liqwalaselwe kukuba amalungelo awodwa omenzi wechiza njengamalungelo eendawo kwaye uyilo luya kukhuselwa kuphela kwilizwe elibhaliswe kulo, kodwa ukusukela oko sifumana umhla wethu wokufaka isicelo, kukho ixesha leenyanga ezili-12 zokwandisa ixesha Ukukhuselwa koluvo okanye uyilo nakweliphi ilizwe.
Ngaba amalungelo epropati yam ekhuselekileyo akhuselwe lilungelo elilodwa lomenzi wechiza?
Eyona nto ifanelekileyo kukuba uye kwingcali okanye kwingcali, ekuxhasayo kwimeko ethile yeli lungelo; Ungaya ngqo kwi I-Patent yaseSpain kunye neOfisi yoRhwebo eMadrid, apho uyakufumana ulwazi olupheleleyo malunga nomthamo onawo xa usenza ilungelo lobunikazi kwindawo yakho.
Ngaba kuyabiza ukubhalisa uphawu lwentengiso kunye nelungelo elilodwa lomenzi kwimveliso?
Ixesha elithathiweyo kunye neendleko zenkqubo ziya kuxhomekeka kummandla okanye kwinani lamazwe ahlukeneyo apho lifumaneka khona ukubhalisa, kodwa singasungula ixesha eliqhelekileyo lokuthengisa uphawu lweenyanga ezili-12 ukuya kwezili-18, ngelixa kwimeko yamalungelo abenzi ixesha lingaphindeka kabini.
Ngokumalunga neendleko umsebenzi werekhodi Kuya kufuneka uhlukanise phakathi kwophawu lwentengiso kunye nelungelo elilodwa lomenzi kwaye, ngaphezu kwako konke, imimandla okanye amazwe apho ufuna ukubhalisa khona.
Umzekelo, uphawu lwentengiso eSpain lunokuxabisa malunga ne-euro ezingama-500 kunye nolwalamano lwe-patent phakathi kwama-euro angama-2.000, ewe kunye neendleko ezifanelekileyo zeengcebiso zobungcali. Omabini la maxabiso abiza ixabiso eliphantsi ukuba sicinga kancinci ukuba ukubhaliswa kuthetha kuphela ukusetyenziswa kunye nokuxhaphaza, kwimeko yophawu lwentengiso iya kuba yeyendalo engapheliyo kwaye kwimeko yamalungelo awodwa omenzi wechiza iya kuhlala iminyaka engama-20, ihlala iqhubeka nokuhlawula iifizi ngonyaka.
Emva kokwazi amaxabiso unokuzibuza:
Kutheni le nto kufaneleka ukuba ndinelungelo elilodwa lomenzi wechiza ngombono wam, ukuba ndingazithengisa iimveliso zam ngaphandle kokubhalisa uphawu lwentengiso?
La inzuzo yokukhuphisana enikezela ukubhalisa uphawu lwentengiso, olufunyanwa kwilungelo elikhethekileyo elinikezwe sisizwe elo libhalise kulo. Ikwasebenza njenge eyahlukileyo kwiimveliso zayo kunye neenkonzo kwaye iyazahlula kukhuphiswano ngokuyinika i nzulu y ukutshatyalaliswa ngentengiso, ukubhalisa uphawu lwentengiso kusebenza ngokulandelelana, ukuze ube nakho ukusukela kubaxelisi kunye nabakhupheli beemveliso okanye iinkonzo ozibhalisileyo, kwaye ukwazi Bamangalele ngenkululeko epheleleyo, kungenjalo, ukhuphiswano lunokubhalisa imveliso yakho ukuba abekho kwaye mphange umbono wakho okrelekrele.
Ngale ndlela, kufuneka icace gca ukuba ukubhaliswa ngokusemthethweni kweempawu zorhwebo okanye amalungelo awodwa omenzi wechiza kuphela kwendlela ezifanelekileyo ezinokubakho, ukubonisa ubunini bengcinga okanye umbono wesicelo seshishini nesorhwebo. Amalungelo awodwa omenzi wechiza ngamafuphi sisihloko sepropathi kwaye ngenxa yoko ivumela umqambi ukuba enze uthethathethwano olufanelekileyo olusekwe kwiseshoni yamalungelo okuxhaphaza kwimbono yokuba ilungelo lomenzi liyakhusela.
E-Spain zimbini iintlobo ze Izicelo onokukhusela ngayo umbono wakho: Iimodeli eziluncedo kunye Amalungelo awodwa omenzi wechiza Nantsi ke umahluko okhethekileyo:
Iimodeli zokusebenziseka zifuna iimfuno ezifanayo ezifanayo kumalungelo awodwa omenzi wechiza, kodwa ngokuthe ngcembe zingqongqo, ezi zisetyenziselwa ukukhusela izixhobo zedigri esezantsi yokuqamba. Oku kujongwa njengokufanelekileyo ngokukodwa kwii-SME ezihlala zisenza uphuculo oluncinci kwiimveliso ezikhoyo. Inkqubo yeModeli yokuSebenza ikhawuleza kakhulu kwaye ayibandakanyi ukulungiswa kwezinye iingxelo.
Ungasifaka njani isicelo semodeli eluncedo?
Isicelo kufuneka senziwe nge uxwebhu lobuchwephesha okanye inkumbulo yoyilo, ekufuneka ikhatshwe ziifom zezicelo ezifanelekileyo kunye nemirhumo ehambelana nayo. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukubhalwa kwememori yokuyilwa kufuneka kunikezelwe kwiinjineli ezinolwazi kwicandelo elinokuchaza umbono okanye imveliso ngokucacileyo ngokubhaliswa kwayo.
Banika ukhuselo lweminyaka eli-10 kunye nonyaka wokuqala wokhuseleko lwasimahla lwamanye amazwe, olunokwandiswa ukuya kwiinyanga ezili-18 ezongezelelweyo, ngesicelo sePCT.
Ngokusebenzisa ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, inkqubo entsha, imveliso entsha, isixhobo esitsha okanye ukuphucula enye yezinto zangaphambili kunokukhuselwa. Inkqubo yelungelo elilodwa lomenzi wechiza ibandakanya ukugqitywa kwengxelo yophando eneenkcukacha kwiziko ledatha elisemthethweni lamalungelo abenzi abenziweyo abhalisiweyo kwihlabathi elibizwa ngokuba Imeko yengxelo yobugcisa.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza abonelela ngokhuseleko kuluvo Iminyaka engama-20 kunye nonyaka wokuqala wokhuseleko lwamazwe aphesheya olunokongezwa kwiinyanga ezili-18 ezongezelelweyo, ngesicelo sePCT.
Ngaba usetyenziso lweselfowuni lunelungelo elilodwa lomenzi wechiza?
Las izicelo mobile ezaziwa ngokuba apps, yinkqubo yekhompyuter ebandakanya indalo eyahlukeneyo yendalo efana: imifanekiso, umculo kwaye kwiimeko ezininzi: igama lophawu okanye igama lorhwebo.
Oku kuyilwa kobugcisa kufuneka kukhuselwe ngeendlela ezahlukeneyo ukufikelela kukhuseleko olupheleleyo nolubanzi.
I-Intanethi sisixhobo esiluncedo ngokubanzi, yiyo loo nto iinkampani ezininzi zinikezela iinjini zokukhangela ezithile ngokukhawuleza ukufumana ukuba uphawu okanye umbono ubhalisiwe kuyo nayiphi na indawo emhlabeni. Apha ngezantsi ndikushiyela ezinye.
Uphando Patent: i-patent injini yokukhangela enikezelwa nguGoogle.
ILatipatInjini yokukhangela yamalungelo abenzi abhalisiweyo ngeSpanish
I-EspacenetUmfaki-Patent obhalisiweyo we-Ofisi yase-Patent yaseYurophu.
Umncinci: Injini yokukhangela yamalungelo abenzi abhalisiweyo ePatent Patent nakwiOfisi yoRhwebo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » ishishini » iinkampani » Uyenza njani into yelungelo lomenzi okanye uphawu